बादलले जित्नु र हार्नुमा कसको के स्वार्थ ? – Khula kura
बादलले जित्नु र हार्नुमा कसको के स्वार्थ ?
विहीबार हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा उप–निर्वाचनमा राम बहादुर थापा ‘बादल’ लाई नेकपा एमाले कै शिर्ष नेताहरु जिताउने र हराउनेमा लागेका छन् । माधव नेपालले खुलेरै समर्थन नगर्ने भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली खुलेरै भोट मागिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका बादललाई जिताउनु र हराउनुमा एमालेका शिर्ष नेताहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ । एमाले मात्र नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको समेत आफ्नो स्वार्थ रहेको छ ।
एमाले भित्रै एउटै सहमतीमा ल्याउन अध्यक्ष ओली कोशिश गरिरहेका छन् तर माधव नेपालले डा. खिमलाल देवकोटालाई दिएको वचन पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राम बहादुर थापा माथी आफ्नै स्वार्थ रहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेता थापालाई ओलीले च्यापेर राख्नुमा दुई थरिको स्वार्थ गाँसिएको छ जसका कारण पनि उनले माधव नेपाल पक्षका नेता र सांसदहरुलाई खासै चाँसो दिएका छैनन् ।
राम बहादुर थापा कै कारण ओली र नेपाल बीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन नेकपा पार्टी फुटेपछि माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरुलाई एमाले प्रवेश गराएर आफूमा प्रचण्ड भन्दा राम्रो राजनीतिक संस्कार भएको पुष्टी गराएका छन् ।
माओवादी केन्द्र ब्युंतिदा एमालेका एक जना नेताहरु पनि प्रचण्ड तर्फ गएनन् तर राम बहादुर थापा सहितका शिर्ष नेताहरुले सांसद पद नै परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका छन् । यो अध्यक्ष ओलीको लागि ठूलो राजनीतिक प्राप्ति हो र यहि कारण ओली जसरी पनि बादललाई जिताउन चाहन्छन ।
अर्को कारण भनेको ओलीले माधव नेपाल पक्षसंग बादल कै लागि सम्बन्ध चिसाएका थिए र अहिले माधव नेपालले खुलेरै बादललाई समर्थन नगर्ने भनेपछि ओलीमाथी थप चुनौती थपिएको छ ।
माधव नेपालसंग नहार्न पनि ओलीले बादललाई जिताउनु पर्ने देखिएको छ । एमाले र सूर्य चिन्हका लागि बादललाई भोट दिन ओलीले आवहान गरिरहेका छन् । माधव नेपाललाई फकाउन समेत ओलीले कोशिश गरिरहेको बुझिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : राम बहादुर थापाका कारण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ठूलो राजनीतिक धक्का परेको छ जसका कारण पनि प्रचण्ड अहिले बादलले हारेको हेर्न चाहन्छन ।
आफ्नै पूर्व राजनीतिक सहकर्मी बादलले नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर ओलीलाई साथ दिए तर प्रचण्डले बादल फर्किन्छन भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न थाले तर सांसद पद नै माया मारेर बादलले प्रचण्डको भन्दा ओलीको पछि लाग्दा देश र जनताको लागि हित हुने भन्दै तर्क प्रस्तुत गरेर प्रचण्डलाई ठूलै धक्का दिएका छन् ।
बादलले दिएको यो पिडा प्रचण्डले सहनु परेको कारण अहिले माओवादी केन्द्रले डा खिमलाल देवकोटालाई बादलको विपक्षमा उठाए । प्रचण्ड अहिले बादललाई हराउन एमाले भित्रका नेताहरुलाई समेत कन्भिन्स गराईरहेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षलाई प्रचण्डले खिमलाल देवकोटालाई समर्थन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
माधव कुमार नेपाल : माधव नेपालको केपी शर्मासंग विवाद पर्नुको मुख्य एक कारण हुन् राम बहादुर थापा ‘बादल’ जसलाई ओलीले माधव नेपाल भन्दा बढि प्राथमिकता दिए ।
माधव नेपालले बादललाई एमालेमा कस्तो स्थान दिनुपर्ने भन्ने कुरा आफूसंग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने माग राखेको कारण ओलीसंग नेता नेपालको विवाद बढेको हो ।
ओलीले बादललाई समर्थन दिएको कारण पनि नेता नेपाल अहिले बादललाई समर्थन गर्न नसक्ने भएका छन् । नेता नेपालले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका बादललाई भोट नदिएर विपक्षीलाई समर्थन गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेर बादल विरुद्द आफू रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बादल हार्नु भनेको ओलीलाई आफूले बार्गेनिंग गर्नसक्ने बाटो खुल्नु साथै प्रचण्डको चोटमा मलम लगाउन समेत सक्ने भएका कारण नेता नेपाल बादललाई हराउनेमा लागेका छन् ।
यी तिन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु संगै एमाले भित्रका शिर्ष नेताहरु समेत अहिले बादललाई जिताउदा आफूहरुलाई घाटा हुने हो कि भन्ने तर्क गर्न थालेको पाईएको छ ।
महासचिव इश्वर पोखरेलदेखि विष्णु पौडेलले बादल आउँदा ओलीसंगको आफ्नो निकटता टुट्ने हो कि भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको एमालेका एक नेताले उल्लेख गरेका छन् ।
जसपालाई प्रधानमन्त्री दिन एमाले तयार छ ?